Kuo, muongorori weKGI anobuda achidzivirira kutengesa kweiyo iPhone 8 uye iPhone 8 Plus | IPhone nhau
Isu tiri munguva inonakidza kwazvo kana iwe ukatarisa runyerekupe nezve iyo kutengeswa kwe iPhone 8 uye iPhone 8 Plus yakatangwa pamusika mavhiki mashoma apfuura. Nekuti ikozvino tinokusiira iwe mukuru ongororo yeimwe yeiyi nyowani iPhone 8 Plus iyo shamwari yedu Karim inotisiya, kana paine munhu anoda kutenga iyo nyowani iPhone modhi.
Asi nhau idzi hadzisi dze mabhenefiti eiyi nyowani iPhone 8 uye iPhone 8 Plus, uye zvinoita sekunge mushure mekushoropodzwa kwese uko iyi modhi ye iPhone yakagamuchirwa kubva kune vanoongorora nezvekutengesa kunotyisa, ivo havana kubvumidzwa nemumwe wevatambi vakuru mu mazwi eguhwa uye nhau nezve iyo iPhone kana Apple, Ming-Chi Kuo muongorori kuKGI Securities.
Kuo, anosvetuka achidzivirira kutengesa kweiyi mitsva iPhone 8 mamodheru mazuva mashoma mushure mekuona rondedzero yese yezvinyorwa zvinogona kuverengerwa mune mamwe midhiya nezvekutengesa kwakashata kwemamodeli aya. Sekureva kwemuongorori iye, fungidziro dzake dzinenge dzakafanana neidzo Apple angave nadzo parizvino uye kutengesa kunogona kufananidzwa neizvo zvinotarisirwa kune iyo iPhone X izvozvi.
Uye ndezvekuti isu takabata nemushushikana mukuru weava vashoma vekutengesa sekureva kwevaongorori, iyo iPhone X. Hongu, midhiya yakati wandei yakagara yafanotaurwa isati yatanga iyo iPhone 8 nyowani pakupera kweshoko guru raGunyana 12 kuti iyo X modhi yegore rino yaizotonga yega kutengesa pasina tsitsi, asi zvinoenderana naKuo chinodikanwa yePhones nyowani ichaiswa mune yakajeka 50-50. Chimwe chinhu icho parizvino chinoratidzika kunge chisingagone maererano nezvinotaurwa nevanoongorora vakawanda.
Kuo pachake anoti chimwe chezvikonzero zvekusava netariro mukutengesa kweiyo iPhone 8 uye iPhone 8 Plus chakakonzerwa chaizvo neizvi, kuti vezvenhau uye vaongorori pachavo havasi kutarisa maziso avo pane inoshamisa iPhone 8 uye nekudaro zvinoita sekunge kudiwa zvishoma kunyangwe - nguva dzose maererano naye - kugara wakadzikama mukati mekufungidzira kwekutanga Tichaona zvinoitika kana iPhone X yaburitswa uye pamusoro pezvose zvijekese kuti stock ichadzikira zvakanyanya, pamwe ichipa iwo manzwiro ekutengesa kwepamusoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 8 » Kuo, muongorori weKGI anobuda achidzivirira iPhone 8 uye iPhone 8 Plus kutengesa
Ndanga ndiri kuchitoro chemaapuro muMadrid uye hapana dambudziko rekutenga iphone 8, mumazuva akati apfuura ayo pachagara paine vamwe vaida kuitenga, uye zvinogona kuitwa pasina dambudziko, ndinorangarira kutenga yangu iphone 7 kuwedzera gore rapfuura izvo zvaive zvisingaite, ndinofunga vanhu vakaita seni vakamirira iyo iPhone X uye kuti kana zvichizonetsa kuwana, iyo iPhone 8 nekungoisa yakakura skrini isina mafuremu angave ips, oled kana chero uye vachisiya iyo dhizaini imwecheteyo ndingadai ndakatombofunga nezve kuitenga, asi zvakare zvimwe chete ………… ..
Zvakanaka, ndinofunga kuti iyo iPhone 8 iri kutengesa yakawanda, zvinoitika ndezvekuti vanhu vazhinji vanozvitenga pamhepo, izvo zvinokurumidza uye zvakasununguka, ichi chinhu chinofanira kutariswa maererano nehuwandu hwevanhu vari muzvitoro.
Kune rimwe divi, chokwadi chekuti pane stock yakakwana ini ndichiri kufunga kuti haisi nekuti inotengesa zvishoma asi nekuti zviripo chaizvo, nekuda kwekufanana kwezvakawanda zvezvinhu izvi zvine chekuita nemhando yapfuura.
Iine iPhone X hazvizoitika saizvozvo, pachave nesheya shoma kunyanya pakutanga uyezve mayuniti achapera nekukurumidza. Ehezve, rondedzero yacho inogara ichibuda ichiti iri kutengesa zvirinani (ichiita kuti itengese kwazvo) uye zvingangodaro zvisiri zvechokwadi uye izvo zviripo ishoko shoma kwazvo kune chaicho chinodiwa.
Tichafanirwa kumirira mwedzi mishoma kuti tikwanise kuenzanisa nekutonga kwakawanda kutengesa chaiko kwetemu dzese uye vanhu vanogona kuneta nekumirira maunifomu eX X uye vozopedzisira vatenga iwo masere kunyanya paKisimusi rinova zuva rakakosha. Isu hatizivewo kana iyo iPhone X ichave iine hurema hwekugadzira kana iri kuzopa dambudziko uye kutengesa kwemodhirowa kunogona kudonha.
Handaizoshamiswa kana iyo iPhone 8 yakatengesa zvakafanana kana kupfuura iyo X. Tinofanira zvakare kufunga nezve mutengo, kwete wese munhu anoda kubhadhara anodarika € 1000 yefoni iyo mukati megore inenge yapera senge munhu wese .
IPhone 8, 8 Plus uye X zvinowirirana neEuropean Galileo positioning system